WD-40 futhi tampons microwaved: izimfihlo ukudla izithombe yembula - Izindaba Rule
WD-40 futhi tampons microwaved: izimfihlo ukudla izithombe yembula
Umsebenzi we stylist ukudla ukwenza imikhiqizo ukubheka okumnandi on ikhamera - ngisho noma Ushintsho olungcono ushiya sakusihlwa engenakudliwa ngobubi bawo. wochwepheshe Six usitshele namaqhinga abo
Lesi sihloko osesikhundleni “WD-40 futhi tampons microwaved: izimfihlo ukudla izithombe yembula” lalotshwa Angelina Chapin, ngoba theguardian.com ngoMsombuluko 4th January 2016 15.51 UTC
Behind kakhulu professional izithombe ukudla stylist ngubani tricks umbukeli. Lezi inkohliso uhla kusuka touch of lipstick ukuze redden a sitrobheli, ukuze "milkshakes" owenziwe kusukela amazambane ecubuziwe. Akukona ukuthi wochwepheshe ukudla are hubu futhi aphambe. Ubathola nje ibhizinisi Improvisation.
Kuwo wonke 10 amahora kuthatha, ngokwesilinganiso, ukuqedela sicu isithombe, wochwepheshe balindeleke bonyana basombulule imiraro iziphi izinkinga ukunikwa spot. Ayikho tzatziki on isethi? Yenza do ne imayonnaise noma ukhilimu ophehliwe efrijini. A client ufuna ukuthi turkey isikhumba ukubheka a "kancane abomvu engeziwe"? Better abe ukudla Umbala on esandleni.
"Lapho ngokudubula, awukwazi ayeke futhi bathi: 'Hey, Ugh, Ngikhohliwe lokhu,' "Kuchaza Denise Stillman, i Orange County-based ukudla stylist ubani waba ebhizinisini 26 iminyaka. "Wena nje uqiniseke [ukuletha izinto ezanele elinqunyiwe] amboze zonke elisekela yakho bese [zibuze], 'Yini enye engase yonakale?' "
Kodwa hhayi konke faked. Umkhiqizo umkhangisi uzama ukuthengisa livame iyavela, uyachaza Stillman. Nini, ngokwesibonelo, yena Kuphendula isikhangiso Breyers, yena Kuphendula real ice cream. Kodwa uma kade ukutayela Gay Lea Foods 'ophehliwe, ayisikhilimu lihlale phezu zingenziwa yini - hushazela njengoba kubukeka esiphundu.
Kungakhathaliseki ngokudubula a commercial ithelevishini noma uprinte isikhangiso, umgomo ukudla stylist ngokuvamile ukuze agcizelele ubuhle isithako semvelo.
"Mina ngifana izinwele kanye makeup ukudla,"Kusho Charlotte Zonke, stylist ezinze eNew York. "Lapho nibona onobuhle ukuhamba phansi evulekile, abawubheki enjengaleyo. Kodwa ngemva bephuma makeup, ufana, 'Hewu.'"
Uma ufuna Instagram izithombe zakho ukudla ukufana thokozela ukudla kwakho nesembozo, sinezinto eqoqwe amacebiso pro eyokusiza. Six wochwepheshe ukudla wasipha izimfihlo zabo sendlela ukwenza izitsha ezivamile bheka balungele yabo close-ups.
Enchiladas: amazambane ecubuziwe anikeze umbono ngobuningi
Ukuze uthole Enchilada liyathandeka looking, engeza amazambane. Photograph: Isithombe ngu-Rick Gayle. Ukudla isitayela by Kim Krejca.
ukudla Mexican akulona photogenic kakhulu. Akekho owazi lokhu kangcono kunoBaba Kim Krejca, stylist Phoenix-based osebenza eziningi cuisine ningizimu-ntshonalanga. "Enchiladas nge sauce ukopha ku ubhontshisi [kukhona] hhayi kakhulu zibukeke emnandi,"Uthi. "Kufanele ukuguqula ukuthi kodwa kusenjalo ukudla."
Ukuze anikeze enchiladas ukubukeka of bulkiness (njengoba kubonakala ngenhla), yena wayishutheka nge osheshayo ecubuziwe amazambane, stylist sika go-yokugcwalisa ngoba kulula ukwenza futhi isikhunta. Bese Krejca ungeze inyama imifino kuze kube semikhawulweni lapho tortilla mawuvuleke. Ukuze awuqede isidlo, wasebenzisa isibhamu ukushisa ukwenza ushizi ancibilike ngokuphelele phezu.
tacos: izipanji yezimonyo ugcine amagobolondo evulekile
tacos: zama izipanji yezimonyo, glue, futhi WD-40. Photograph: Isithombe ngu-Rick Gayle. Ukudla isitayela by Kim Krejca.
Ekuphileni kwangempela, tacos Uyi lokudlela okumnandi. Ukuze abenze lemukelekako on camera, Krejca ethe njo tortilla ababili ndawonye futhi ibekwe izipanji yezimonyo ngemuva inyama ukugcina amagobolondo evulekile. Ngoba yenkomo emnyama kanye namanzi-looking, Wagqaba izingcezu nge sauce brown esibizwa Kitchen Bouquet, wenza amanzi kanye nokudla Umbala. Krejca ke wafutha ukugcwaliswa nge WD-40, isikhali sakhe secret ukwenza Mexican abonisa ukuthi iyaphila ukudla. Stillman isebenzisa pepper red esikhundleni utamatisi Diced for umbala ogqame kakhudlwana more abese ethulula corn isiraphu ubhontshisi ukuze zibukeke omanzi fresh.
cereal: Imikhiqizo izinwele zabantu lo muthi ukwenza esiphelele 'ubisi'
Ingabe uncamela cereal yakho eyomile noma izinwele ukhilimu? Photograph: Isithombe ngu-Chris Elinchev at Small Pond Productions. Ukudla isitayela by Tamara Kaufman.
Lokhu kungase konakalise inhliziyo, kodwa ubisi asetshenziswe cereal izithombe kuvamise fake. Njengoba Izinto real kwenza ngokushesha cornflakes bheka Soggy, wochwepheshe ukudla bavela ezinye izindlela. Kulesi sithombe, Wisconsin-based Tamara Kaufman esetshenziswa Wildroot, a uboya baba mhlophe ukhilimu for amadoda nge ovikela isikhumba elangeni-like ukungaguquguquki ukuthi wochwepheshe abaningi ungafisi. Krejca ukhetha indlela endala-school glue white, okuyinto izithombe like nje deal real. Lapho elithola do angasebenzisi ubisi langempela, kungcono nje esincane kakhulu. Ngokusho Michelle Rabin, a Toronto-based ukudla stylist, ungafaka izingcezu amahle kakhulu cereal endishini wagcwala yemifino kokunciphisa alisibekele ungqimba ezondile ubisi. "Lo kokunciphisa umelana uketshezi futhi libukeka wonke isitsha sigcwele izindunduma zenhlabathi cereal,"Uthi. "Izingcezu kuzohlala pretty omnandi okwesikhathi eside."
Ikhofi: bazithela phansi soy sauce gelatin anikeze look smooth
Ukuze uthole ikhofi smooth-looking, zama amanzi kanye gelatin. Photograph: Photo kweBheti UGalton. Retouching by Ashlee Gray. Ukudla isitayela by Charlotte Zonke.
Black coffee Kunzima ukusebenza nge ngenxa sheen yayo oily. Phakathi ku Latte noma cappuccino, Foam uzoshesha shabalala. Kulesi sithombe, Zonke wasebenzisa inhlanganisela ka Kitchen Bouquet, amanzi kanye gelatin ukunikeza ikhofi look smooth. In ingcosana, Rabin uye wasebenzisa bazithela-phansi soy sauce futhi ngake sokwenza nge cream umhluzi browner isethi a brand Canadian ethandwa. "Ngiyabona ukuthi billboard engangisebenza mina ngifana: 'Kuyahlekisa lokho, ngoba lokho akuyona ikhofi,' "Uthi. Kaufman isebenzisa deal real uma kungenzeka, kodwa unezela amaconsi amanzi anensipho emhlabeni azungezwe nge eyedropper akwazi phisa fresh. The froth, wochwepheshe uthi, uvame ayenziwa ngesikhumba ngamapayipi insipho Foam.
igalikuni: kungase kube eluhlaza kanye bloody ngaphakathi, kodwa isikhumba kubukeka enza kahle
turkey ehlaza ivame iyavela izikhangiso. Photograph: Isithombe ngu-Marshall Troy. Ukuphasa isitayela Grace Knott. Ukudla isitayela by Charlotte Zonke.
Njalo chef ekhaya uyazi kunzima lokwenza crispy inyoni phezu phandle olumanzi ngaphakathi. Ngenhlanhla, wochwepheshe ukudla kuphela ukugxila sobuhle bayo, okusho ukuthi akakaze upheka ngokugcwele eyodwa. "Kubalulekile hhayi overcook kubo ngakho isikhumba uhlalela looking omanzi, plump kanye namanzi,"Kusho omnes. "Lawa tibonwa ezenza amanzi umlomo wakho uma ubuka it." I-New York-based stylist Brian Preston-Campbell uthi wayevame wosa turkeys ezinhlanu noma eziyisithupha amahora ambalwa ngamunye ukuze uthole ukuthi 'uphelele hero bird ". "Kuba namanje eluhlaza kanye uhlobo bloody ngaphakathi," uthena. "Kusinda ezimbi kodwa kumayelana okwaphuma lapho kuyilo esitfombeni."
Kulesi shot, Zonke wasivalela isikhumba turkey ngakho-ke kwakungeke likhiphe kuhhavini. Yena ujenga pan futhi eyayigcwele le nyoni ngamanzi ezazigcwele iphepha ngethawula ukuze kungasuki ukuwapheka ngesitimu kunokuwabilisa esikhundleni kuyithuba crispy. Ukuze kuzuzwe lelo brown, ezibenyezelayo look, yena ukunganakwa turkey nenye amanzi, Ikhishi Bouquet nesitsha insipho.
Ice cream noma ophehliwe: kokunciphisa, corn isiraphu frosting
Frosting plus lukashukela kwenza umxhwele-looking ice cream. Photograph: Isithombe ngu-Marshall Troy. Ukuphasa isitayela Grace Knott. Ukudla isitayela by Charlotte Zonke.
Uma ice cream ngamashumi umfuziselo womuntu, wayezoba a diva. I dessert kunzima ukuba ambumbe, futhi uma kungenjalo ukutayela endaweni esiqandisini, uncibilike ngokushesha. Ukuze ugweme ubuhlungu bekhanda, ochwepheshe ngokuvamile baphendukela nezinye izithako. Ukwakha i-"ice cream" ngakwesokunxele, Zonke exutshwe frosting nge lukashukela (Intaba ngakwesokudla iyona deal real), kodwa ezivame kakhulu inkohliso ice cream iresiphi kuba inhlanganisela yemifino kokunciphisa, ushukela oluyimpuphu kanye corn isiraphu.
Ukuthola eminye uphudingi Milky, wochwepheshe babe hacks eziningi. Ukuze uthole dollop ophehliwe, Zonke wasebenzisa Creamer non-dairy 'ongahlali nini noma nikhale ". Kaufman ukhetha Barbasol ukushefa ayisikhilimu kodwa amanothi: "Owesifazane enza iphutha lapho wazama kokulunywa akakuthandanga lokho." Ngoba milkshakes, Stillman isebenzisa ukhilimu omuncu ngoba kungcono obukhulu futhi kulula ashwibeka.
Iziphuzo: ingilazi nesithwathwa? Kuba spray-on isiqedaphunga
Uma isiphuzo sakho awunazo sheen kwesokudla, nje fafaza abanye isiqedaphunga kuso. Photograph: Alamy
Wochwepheshe musa ukuchitha obuningi ngempela uma isikhangiso iwukuba utshwala. Ukuze wenze Iziphuzo, Zonke Ihlangana ukudla Umbala emanzini, a Kaufman iqhinga futhi isebenzisa ukwakha "chardonnay" kusukela buhlanjululwe Kitchen Bouquet. eqinisweni, ketshezi ngokwalo sideshow. "Ingxenye ebaluleke kakhulu mayelana cocktail yiwona tibonwa,"Kusho omnes - tinkhomba ezifana ice, Fizz, Bubbles and froth. "Bathi [ukwenza isiphuzo] bheka zokuqabuleka. "
Ngoba iziphuzo eqandisiwe like margaritas futhi daiquiris, elithola ancike ice powder, izingcezu gelatin ukuthi ibukeke ice ochotshoziwe lapho exutshwe liquid. Basebenzisa plastic fake noma UV ice cubes, okuyinto musa zincibilike lapho izibani ikhamera hot and Vaseline phezu kwesiyingi margaritas. Ukwakha frost, Stillman amajazi mug ubhiya ne spray-on isiqedaphunga futhi isebenzisa inhlanganisela Scotchguard futhi glycerin ukwenza iziphuzo ezibandayo bheka obandayo bakhona bushubisa umnkantsha ubuhlalu of ukufingqa. "Yeka inkinga bekuyoba ngenye,"Kusho Stillman. "Ngale ndlela, ungakhetha ezingeni ubumanzi on the glass. "
pasta njengoba kushisa kule ndawo: impepho unikeza ukubukeka umusi
Leso senzakalo lapho umusi esukuma kusukela pasta like nkungu ngaphezu intaba yami yama ngezikhwepha kunzima ukuba liyobamba ngokwemvelo ikhamera. Kaufman efihla iphasela tin ucwecwe of umusi chips ngaphakathi isitsha pasta bese unezela amanzi ukudala ngentukuthelo. Ukuze uthole umphumela ofanayo, naye ovuthayo impepho futhi kamuva isuswe induku nge Photoshop, kuyilapho amanye amaqhinga ezihilela umkhumbi izingubo noma ugwayi intuthu. By kude indlela ezithakazelisayo kakhulu Microwave tampons amanzi ezazigcwele (ukotini amabhola ukusebenza kanye) ngiyongcwaba kubo ngemuva isidlo. "Mina banabo kit yami nje uma kwenzeka,"Kusho Kaufman. Kungakhathaliseki ukuthi inqubo, Uthi umusi ngaso sonke isikhathi kufanele esingu ngokumelene isizinda emnyama.
← 10 the best travel zokusebenza Tipron: A Rolling Eyeball Robot Projector [VIDEO] →